चुम्बन गर्ने सपना किन?
एक चुम्बन सधैँ मायालु, प्रलोभन, करुणा र मायालु व्यक्तिहरूको हेरचाह संग जोडिएको छ। ठीक छ, र निस्सन्देह, वसन्तमा ...
चुम्बन, निस्सन्देह, केहि मायालु जोडेसँग सम्बन्धित छन्, जुनसुकै ठाउँमा पार्कमा बेंचमा वा जुनसुकै मायालु मेहर प्रवेशमा चुम्बन गरिन्छ।
अजनबीहरूलाई चुम्बन गर्ने सपना किन?
यदि तपाईं सपना देखाउनुहुन्छ कि तपाईले "पार्क-वसन्त" परिस्थितिमा ठीकसँग पूर्ण रूपमा अपरिचित व्यक्तिलाई चुम्बन गर्दै हुनुहुन्छ, यो एक स्पष्ट संकेत हो जुन तपाईं मनको उच्च स्थितिमा हुनुहुन्छ र प्रेमको आगमनको आशा गर्नुहुन्छ । यसको अतिरिक्त, तपाईं निकट भविष्यबाट धेरै आशा गर्नुहुन्छ। तर तपाईले चुम्बन जोतेको संग चिन्ता गर्नुहुन्छ, भन्नुहोस्, तपाईलाई पूर्ण रूपमा अपरिचित छ, तपाईका वरिपरिका मानिसहरु लाई अझ बढी सिक्न र तपाईंको आफ्नै ज्ञान र सिकाशमा शंका गर्न तपाईँको इच्छाको बारेमा भन्नुहुन्छ। र यो इच्छा पनि अवचेतन स्तर मा पुग्छ, आफैलाई सपना मा प्रकट।
आउनुहोस् सबैभन्दा अनुकूलन, पहिलो नजरमा, सपनाको संस्करण - किन आफ्नो प्रिय व्यक्ति संग चुम्बन गर्ने सपना। यो विश्वास छ कि यो, समानुभूति, तपाईंको धोखाधडी गर्न र एक अजनबी चुम्बन - यसको विपरीत, जीवन र सुसमाचारमा सुखद परिवर्तन गर्न।
किन चुम्बनमा चुम्बन गर्ने सपना?
भावुक असीमित र लामो समय चुम्बन - छिटो विभाजन, र, अधिक भावुक - लामो विभाजन हुनेछ। त्यो हो जुन जुनसुकै जुनसुकै अर्थ हो त्यो एक विवेक हो।
यदि तपाईं सपना देख्दै हुनुहुन्छ कि तपाई आफ्नो पूर्व-प्रेमीलाई चुम्बन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि यसको अर्थ उहाँ पनि तपाईंको बारेमा सोचिरहेको छ र जुलुसको धेरै पीडा भइरहेको छ। त्यसोभए, तपाईं उनको साथ द्रुत पछाडिको आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं एक सपनामा देख्नुहुन्छ कि उनी कसरी आफ्नो प्रेमिकासँग चुम्बन गर्नुहुन्छ, त्यसो गर्दा यो उहाँको तिर आफ्नो ईर्ष्याको चिन्ह हो, र प्रेमको कारण। तपाईंलाई थाहा छ, प्रेम र ईर्ष्या एउटै सिक्काको दुई पक्ष हुन्।
यो विशेष रूप देखि सुखद छ, बेशक, सपना को लागि कि तपाईं आफ्नो प्रियजन चुम्बन गर्दै छन्, एक धेरै सुखद भावना संग जागते समय। तथापि, तपाईंको प्रेमी प्रेमीसँग चुम्बनको बारेमा कस्तो सपनाहरू शायद एक विशेषज्ञलाई खुसी पार्नेछन् सपनाको व्याख्यामा - यो एक ह्रास चीज हो, यो तपाईंलाई पुरा तरिकाले अप्रिय आश्चर्य संग प्रस्तुत गर्न सक्छ। घडीमा रहनुहोस् - सायद तपाईंको प्रेमीको भविष्यको लागि योजनाहरू छन्, र तिनीहरूमा तपाईंको ठाउँ छैन ...
ठीक छ, यदि तपाईं अजनबी को चुम्बन को बारे मा कुरा गर्छन, र तपाईं आफ्नो प्रेमी संग ठीक हो, यसको अर्थ छ कि तपाईंको आत्मा मा गडबडी छ, र त्यहाँ पुरा तरिकाले अनावश्यक टक्करहरु हुन सक्छ। र के तिनीहरू अझै पनि आवश्यक हुन सक्छ? आफैलाई बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्, आफ्नो नजिकको साथीसँग परामर्श गर्नुहोस्। तर, यहाँ आरक्षण गर्न आवश्यक छ - एक मित्रको कुरा, निस्सन्देह, सुन्नुहोस्, तर मनले तपाईंलाई बताउँछ। कुनै पनि अवस्थामा, यो तपाईंसँग निर्णय गर्न एक छ, त्यसैले कुनै गल्ती छैन।
घरको बिरालो - लक्षण र विश्वास
कालो स्पाइडर किन सपने?
पैसाको लागि पाम आइतबारका लक्षणहरू
हामी किन झन्डा छ?
किन सेतो चाउको सपना देख्छ?
तपाईका खुट्टामा गहिरो किन सपना देख्नुहुन्छ?
मरेको दादी किन बाँचेको छ?
एक जना मायालु मानिसले कस्तो सपना देखाउँछन्?
फोटोग्राफिङ किन सपने?
ट्रिनिटी अगाडि शनिबार - तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
चाकू संग किन खाँदैन?
अतिथिहरू के बारे मा सपना देख्छन्?
शरीरमा जन्म चिन्ह - मूल्य
मैक्सिलरी सिनुसाइटिस को कतार
25 अकेला ड्याड र तिनीहरूका छोरीहरूका बारेमा फोटो कथाहरू स्पर्श गर्दै
एक बेज कोट को के पहनने को साथ - हरेक स्वाद को लागि फैशन चित्रहरु को तस्वीरहरु को चयन
खेलकुद कपडाहरू - सक्रिय फैशनेबलहरूको लागि उत्कृष्ट ब्रान्ड मोडेल
मार्लिन मेनन बिना मेकअप
नोम मंदिर हाँ
2014 मा कस्ता गहना छन्?
रातो माछासँग रोल गर्नुहोस्
गर्भावस्था मा क्लोरीहेक्सिड मोमबत्तीहरु
नवजातमा ग्रीन स्टूल
यो धेरै जोखिमपूर्ण छ: एशले ग्राहमले छोटो लेटेक्स कपडामा राखे
विन्डो सिल्कमा पर्दा
शो बिग तारेको सवारमा अनावश्यक माग, जसबाट कन्सर्टका आयोजकहरू पागल हुन्छन्
अर्गन तेल राम्रो र खराब छ
Peonies को वेडिंग गुलदस्ता
Enrique इगल्सियस र अन्ना Kournikova को प्रेम कथा को बारे मा7दिलचस्प तथ्यहरु
कसरी चरणहरूमा बच्चाहरूलाई कबूतर आकर्षित गर्न?
कालो रास्पबेरी कम्बरल्याण्ड - उपयोगी गुणहरू
नयाँ वर्षको लागि कसरी शौक बनाउने?